Apple wuxuu sii daayaa Betas shanaad ee tvOS 14 iyo WatchOS 7 | Wararka IPhone
Apple ayaa hadda la bilaabay shanaad betas ee shirkadaha cusub ee sanadkan ku dhowaad dhammaan qalabkaaga. Kaliya laba toddobaad ka dib markii la sii daayay betas afaraad, waxay ahayd wax ka yar saacad tan iyo markii ay ka dhigtay kuwa shanaad ee loo heli karo horumariyeyaasha si ay u cusbooneysiiyaan qalabkooda tijaabada ah.
Aniguna waxaan leeyahay ku dhowaad kasta, maxaa yeelay saacad ayaa laga joogaa tan iyo markii la bilaabay iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 iyo watchOS 7 oo aan raad laga helin macOS Big Sur.
Waa in ka yar laba saacadood tan iyo markii la sii daayay betaskii shanaad ee horumariya ee saxiixayaasha cusub ee Apple sanadkan. Dhammaan marka laga reebo MacOS Big Sur.
Loogu talagalay jiilka afraad iyo shanaad ee moodooyinka TV-ga Apple, tvOS 14 beta-ga cusub wuxuu imaanayaa laba toddobaad ka dib markii la bilaabay beta-kii afraad. Horumar diiwaangashan ayaa soo dejisan kara nooca beta-ka cusub ee tvOS 14 on Apple TV iyada oo loo marayo astaan ​​lagu rakibay barnaamijka Apple ee barnaamijka Xcode
watchOS 7 Waxay imaanaysaa deyrtan, waxaana jira tan muuqaalo ah oo ubaahan tijaabooyin kahor cusbooneysiinta kama dambeysta ah ee kudhaca dhammaan isticmaaleyaasha. Horumariyayaashu waxay hadda soo dejisan karaan nooca shanaad ee beta-ka ee watchOS 7 si ay u tijaabiyaan oo ay u abuuraan codsiyada saacadaha cusub iyo dhibaatooyinka u dhigma.
Waa inaad rakibtaa a aqoonsado on Apple Watch, ka dibna ka soo degso softiweerka ku jira iPhone-ka socodsiinta nooca beta ee iOS 14, ku wareeji, oo toos u noolow. Ma ahan wax adag, laakiin waxay u baahan tahay dulqaad waxaana laga yaabaa inaad dhib u hesho.
Apple waxay had iyo jeer bixisaa cusbooneysiin loogu talagalay iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, iyo macOS sida horudhaca loogu talagalay horumariyaasha ama betasyada dadweynaha sanad kasta.
In kasta oo betasyadu badanaa caadi yihiin xasilloon, waxaa ku jiri kara khaladaad maadaama ay yihiin nooc horudhac ah oo ka hortagi kara isticmaalka caadiga ah ee taleefannadaada iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ama Mac.
Taasi waa sababta halkan ka dib marwalba aan kugula talinno ha tijaabin betas hore Illaa aad tihiin barnaamij soo saare ama aad taxaddar u isticmaasho betasyada dadweynaha. Haddii aad ku tiirsan tahay qalabkaaga, sug nooca ugu dambeeya. Xitaa haddii ay yihiin betas dadweyne, way kaaga tagi karaan adiga oo daldala.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple wuxuu sii daayaa shanaad tvOS 14 iyo watchOS 7 horumariye betas
DoubleTake, barnaamijka noo oggolaanaya inaan wax ku duubno dhowr kamarad oo isku mar ah, wuxuu yimaadaa iPad Pro